THAZINRANANT: 5/27/12 - 6/3/12
အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ် ဆိုတာ ဘာလဲ
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud for personer som ønsker å komme i arbeid eller aktivitet, men som trenger noe tilpasning og tilrettelegging.
အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်ဆိုတာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲကိုဝင်ရောက်လိုပေမယ့် အလုပ်နှင့် လိုက်လျော ညီထွေ အောင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလွယ်ကူချောမွေ့အောင် လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်နေသေးသူတွေအတွက် ကမ်းလှမ်းပေးတဲ့ အစီ အစဉ် ဖြစ် ပါတယ်။
Kvalifiseringsprogrammet skal være individuelt tilpasset og inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter som trengs for å komme i arbeid eller aktivitet.
ဒီအစီအစဉ်ဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီကို အလုပ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လဲဖြစ်ပါတယ်။
Programmet kan også inneholde andre tiltak som er med på å forberede overgang til arbeid. Slike tiltak kan være opplæringstiltak, motivasjons - trening og lignende.
အစီအစဉ်ထဲမှာ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့သင်တန်းပေးတာတွေ၊ အလုပ် လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လေ့ ကျင့်ပေး တဲ့ အစီအစဉ်တွေ နှင့် အလားတူ အစီအစဉ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Programmet kan bestå av tiltak fra kommunen, fylkeskommunen, NAV, frivillige organisasjoner og private bedrifter.
အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်မှာ သက်ဆိုင်ရာ မြူနီစီပယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်၊ NAV(Norges Arbeids- og Velferdsforvaltningen) နော်ဝေး အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ စေတနာ့ ၀န်ထမ်း အဖွဲ့များ၊ နှင့် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေ ပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Hvem kan ha nytte av programmet?
အစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေကို အကျိုးပြုနိုင်မလဲ။
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til personer som trenger og ønsker tett oppfølging, spesielt i oppstarten av programmet.
အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်ဟာ အထူးသဖြင့် အစီအစဉ်အစပိုင်းမှာအနီးကပ်ကြီးကြပ် ပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေ အ တွက် သီးသန့်စီစဉ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Personer som har hatt sosialstønad som hovedinntekt i lang tid, og personer som ikke kan dra nytte av andre ordninger er aktuelle for Kvalifiseringsprogrammet.
လူမှုဖူလုံရေးအထောက်အပံ့တခုတည်းကိုပဲ အဓိက၀င်ငွေအဖြစ်အားထားနေရတဲ့ သူတွေ၊အခြားအစီအစဉ်တွေနှင့် အံဝင်မှု မဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီအရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်ဟာ အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
Kvalifiseringsprogrammet skal bestå av arbeidsrettede aktiviteter i kombinasjon med andre tiltak som kan forberede overgang til arbeid.
အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို ၀င်ရောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အလုပ်နှင့်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ရှားမှုတွေ ပေါင်း စပ်ထားတဲ့ အစီအစဉ်တွေပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
Veileder og bruker skal sammen planlegge innholdet i programmet, og brukeren skal ha stor innflytelse på innholdet i programmet.
ကြီးကြပ်ပေးသူနှင့်အသုံးပြုသူတို့အတူ အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲကြမှာဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုသူအနေနှင့် အစီအစဉ်ထဲမှာ ပါဝင်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီး လွှမ်းမိုးမှု အများကြီး ရှိ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Før programmet iverksettes skal det gjennomrøres en arbeidsevnevurdering og det lages en individuell plan som beskriver innhold og oppfølging i programmet.
အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်ကိုမစတင်ခင်မှာ ပါဝင်တွေရဲ့ အလုပ် လုပ်နိုင်စွမ်းအကဲဖြတ်မှုကိုအယင် လုပ်ဆောင် ရ ပါ မယ်။ အဲဒီအကဲဖြတ် မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးမှ တဦးချင်းစီရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Planen skal inneholde aktiviteter som styrker muligheten til arbeid, aktivitet og økt deltakelse i samfunnet.
တဦးချင်းစီရဲ့အစီအစဉ်မှာ အလုပ်ရနိုင်ခြေမြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်တွေ၊လှုပ်ရှားမှုတွေ နှင့် နော်ဝေးလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တိုးမြှင့် ပါဝင်တာ တွေ စတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
Deltakeren har ansvar for å følge opp planen i samarbeid med veileder fra NAV- kontoret.
အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်သူတွေအနေနှင့် NAV ရုံးက ကြီးကြပ်ပေးသူရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူ မိမိရဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်ကို လိုက်နာရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်။
အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်ရဲ့ အထောက်အပံ့က ဘာလဲ။
- Deltakere i Kvalifiseringsprogram har rett til kvalifiseringsstønad
- အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်သူတွေမှာ အရည်အသွေးမြှင့်ထောက်ပံ့ကြေးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
- Stønaden tilsvarer 2G(to ganger grunnbeløpet i folketrygden)
- ထောက်ပံ့ကြေးပမာဏဟာ အခြေခံလူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်ရဲ့ နှစ်ဆနှင့် ညီမျှတဲ့ပမာဏ ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
- For deltakere under 25 år er stønaden 2/3 av full stønad.
- အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်သူဟ အသက်၂၅ နှစ်အောက်ဆိုယင်တော့ ထောက်ပံ့ငွေအားလုံးရဲ့ သုံးပုံ နှစ်ပုံကို ရရှိ ခံစား ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Det gis et barnetillegg 22 dager per måned.
- ခလေးအတွက်အပိုထောက်ပံ့မှုအဖြစ် တလကို ၂၂-ရက် ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
- Det må betales skat av stønaden.
- ထောက်ပံ့ကြေးငွေက နေ အခွန်ပေးဆောင်ရပါမယ်။
- Deltakere på Kvalifiseringsprogrammet har rett til bostøtte og barnestøtte.
- အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်သူတွေအနေနှင့် အိုးအိမ်အထောက်အပံ့ နှင့် ခလေးအတွက် အထောက် အပံ့ ငွေများကိုခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
Hvor lenge varer Kvalifiseringsprogrammet?
Kvalifiseringsprogrammet skal være helårig og på full tid.
အရည်အသွေးမြှင့်အစီအစဉ်ဟာ တနှစ်လုံး အချိန်ပြည့် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Det kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan programmet forlenges med ett år, eventuelt mer dersom det er nødvendig.
ပထမ တနှစ်တာကာလ ပြီးဆုံးပါက နောက်ထပ် တနှစ်တာကာလအထိအသစ် ထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ အစီအစဉ်ကို တနှစ်ထပ်မံတိုးပြီးပါက လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး နောက်ထပ်တနှစ်ထိ ထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 09:14 No comments: